Col. C/llahi Yusuf oo Yemen iyo Itoobiya shirka Sanca uga codsanaya Hub iyo Ciidamo
C/llahi Yusuf iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka socda garabkiisa ayaa u kicitimay Dalka Yemen, wuxuuna halkaas uga qeyb gelayaa isbaheysiga Sanca oo berito ku kulmaya magaalada Sanca.
Cabdullahi Yusuf ayaa bilihii u dambeeyey wuxuu dib u gurasho ka sameynayey xaruuntiisa Jowhar, halkaas oo uu qorsheynayey inuu si tartiiba ugala baxo hantida iyo taageerayaasha ay isku heybta yihiin.
Waxaa sidoo kale aad loo dareemayey meelkadhacyo loo geysanayo Maxamed Dheere iyo magaalada Muqdisho iyadoo wasaqeyntaas loo adeegsanayo Cabdalla Deerow iyo Mowliid Macane. Dhaleyceynta nuucaasa ayaa la xaqiijiyey in C/llahi Yusuf iyo kooxdiisa ku fekerkaa ay la wadaagaan nimankaas codbaahinta loo isticmaalay.
Degaanka Jowhar dadka degan ayaa deyn badan waxaa ka qaba madaxda iyo kooxda C/llahi Yusuf oo ay Jowhar xaruuntoodu tahay. Sidoo kale maamulka gobolka Sh/Dhexe ayaa geliyey hanti fara badan martigelinta taageerayaasha C/llahi Yusuf, waxaana hadda muuqata in kooxdaas ay isku diyaarinayaan iney isaga baxaan Jowhar, wixii hubana ay ka rartaan.
Col. C/llahi ayaa dhawaan ka soo noqday safar uu ku tegey gobolka Bari si tuulada Carmo uu uga furo xaruun ciidan. Waxaa isi soo taraya qorshaha uu ku doonayo C/llahi inuu ka raro ciidamadiisa Jowhar una raro xaruunta cusub ee Carmo.
Waxaa horay shirka Isbaheysiga Sanca loogu tala galay inuu ka qeybgalo C/llahi Shiikh Ismaciil oo keliya, waxaana si lama filaana shirka u aadey Col. C/llahi Yusuf. Waxaa la qiyaasayaa in C/llahi uu dowladahaas ka codsanayo in lala hirgeliyo xaruunta ciidamadiisa oo u baahan hub culus iyo daryeelka ciidankaas oo laga gacan siiyo.
Dowladda Yemen ayaa hadda ka hor waxey C/llahi siisay hub fudud oo fara badan, kaas oo uu ula kacay xero ku taala Jowhar. Isimada Bari ayaa mar hore kula taliyey inuusan wax huba la aadin Jowhar, gaar ahaan hubka culusna ciidanka Bari degan uu gacanta ugu jiro.
Safarka deg degaa ee Col. Cabdullahu Yusuf ayaa loo macneeyey mid uu ku doonayo in loogu soo dhiso ciidan xoogan oo loo dhameeyo qalabka culus ee ciidamada. Waxaa sidoo kale muuqata inuu markaan doonayo inuu xaruuntiisa Jowhar ka bedelo una guryo noqdo gobolka uu ka soo jeedo si uu halkaas deeqda dalka la siiyo uu ugu abuurto ciidan tayo leh oo xabashi iyo Yemen ay kala howlgalaan ciidan huwana.